Akụkọ - Urban Geophone Array na-enye ọhụụ ọhụrụ na Los Angeles Basin
1 August 2018 – N’iji ọtụtụ kọfị nwere ike ịbugharị geophones gbasoro ihe dị ka otu ọnwa n’azụ ụlọ, ebe a na-eme golf na ogige ọha na eze, ndị nyocha chịkọtara data zuru oke iji nye ha ohere ịpụta omimi na ọdịdị nke ala San Gabriel na San Bernardino. Los Angeles, California.
Seismologists chere na ndị a sedimentary basins nwere ike ime a "waveguide" na-elekwasị anya na ọnyà ike si ala ọma jijiji na ndịda San Andreas Fault, ya mere ịghọta ha ihe owuwu dị mkpa iji nyere ịkọ otú ha nwere ike ọwa ike site na ala ọma jijiji dị otú ahụ banye n'ime obodo Los Angeles .
Ndị otu nyocha ahụ, nke Patricia Persaud nke Mahadum Louisiana State na Robert Clayton si na California Institute of Technology, nwere ike ịkọwa ọwa mmiri abụọ a karịa nke ọmụmụ gara aga, dị ka akụkọ ha dị na Akwụkwọ Ozi Nnyocha Seismological. Ha na-egosi na efere San Gabriel ahụ miri emi karịa nke San Bernardino na basin San Bernardino nwere ọdịdị adịghị mma. Persaud na ndị ọrụ ibe ha chọpụtakwara ihe ịrịba ama nke oke iwe na ngwugwu nke ala nke nwere ike ibute mmejọ abụọ-mmejọ Red Hill na Raymond-ndị edeburu na mbụ na mpaghara ndị dị nso na elu.
Patricia Persaud na Mackenzie Wooten, bụ ndị na-agụghị akwụkwọ na CalTech, na-etinye ọnụ n’ogige nke ụlọ obibi dị na Los Angeles. / Patricia Persaud
Persaud kwuru, "Ọ bụ n'oge agafeela ịsị etu nsonaazụ anyị ga-esi gbanwee etu anyị nwere ike isi chee ike ite mmiri ndị a iji nye ike ikuku. "Otú ọ dị, anyị na-achịkọta data ọzọ na mpaghara nke a ga-eji mee ka usoro mmiri ahụ dịkwuo mma."
Geophones bụ ngwa na-agbanwe ọsọ ọsọ nke ala na-agagharị na voltaji nke enwere ike iji chọpụta jiometrị nke ihe owuwu dị n'okpuru ụwa. N'iji anya nke uche na ihe omuma nke ihe ndi ozo na-acho otutu onu ogugu ndi na-agha agha nke oma ka ha weghachite mgbanwe di nkpa na uzo ozo. Ngwakọta Geophone na-enye ụzọ dị ọnụ ala ma ga-ekwe omume iji chịkọta data a na ọtụtụ obodo ndị mepere emepe, ma e jiri ya tụnyere nsogbu na mmefu nke ịbugharị igwe oke igwe, Persaud kwuru.
Nke ọ bụla n’ime narị abụọ na iri abụọ na abụọ ahụ e webatara n’ọmụmụ ihe, n’ahịrị atọ gbatịrị n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ, dị ihe dịka kọfị. "Ha dị ihe dị ka pound isii ma nwee ihe ndekọ data, batrị na ihe ndekọ ihe niile n'otu akpa," ka Persaud kọwara. “Iji debe ha n’ime ala anyị ga-egwu obere oghere nke ga-eme ka oghere ahụ jupụta ihe dị ka sentimita abụọ nke ala ozugbo ha gbanyesiri ike. Imirikiti ndị bi na Los Angeles na-agwa anyị ka anyị tinye ha ebe ọ bụla anyị chọrọ, ụfọdụ na-enyere anyị aka igwu olulu ahụ; ya mere, anyị na-ahọrọ saịtị na mbara èzí ha ma n'ihe dị ka nkeji ise anyị nwere ọnụ ọnụ ebe ahụ ma na-edekọ.
N'ọtụtụ oge, ndị nwe ụlọ "nwere ezigbo mmekọrịta ma nabata" n'oge ọmụmụ ihe ugbu a, Persaud kwuru. “Ihe na-adọrọ mmasị bụ mgbe anyị nwetara nzaghachi dị mma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Ndị bi na Los Angeles maara nke ọma ihe egwu seismic dị elu na mpaghara a, ma na-achọkarị ịmụrụ ihe gbasara ọmụmụ ihe anyị na ọnụ ọnụ ha, ha chọkwara ịmatakwu. Fọdụ na-ekwu gbasara mgbasa ozi gbasara mgbasa ozi anyị site na mgbasa ozi mmekọrịta ma gbaa ndị enyi ha na ndị agbata obi ha ume isonye. ”
Ọnọdụ ndị ahụ na-anakọta data na ụbọchị 35. N'oge a, ha chọpụtara ngagharị nke ala site na 6 dị ukwuu na ala ọmajiji ndị ka ukwuu nke mere ọtụtụ puku kilomita site na Los Angeles. Enwere ike iji usoro ịwa mmiri nke ala ala ọma jijiji ndị a site na usoro a na - akpọ usoro nnata ihe iji gosipụta ọkpụrụkpụ nke jikọrọ ọnụ na akụkụ ikuku na-emighị emi dị n'okpuru ọdụ ụgbọ ala. Ọrụ ndị natara site na nhazi nodal yiri nke a na-agbakọ site na data brọdbandị, ndị nchọpụta ahụ kwubiri, mana usoro nodal na-enye mkpebi dị elu karị na akụkụ jikọrọ ọnụ dị ka ókè dị n'agbata eriri na uwe mgbokwasị na mmekọrịta dị n'etiti sedimenti na okpuru ulo okpuru ulo.
N'oge okpomọkụ a, ndị ọrụ nyocha ahụ laghachiri na California na-etinye ọnụ "n'akụkụ ahịrị ndị edobere iji jupụta ebe ọ bụla enwere ike inwe mgbanwe ụdị bekee," ka Persaud kwuru. “Anyị ka nwere ugbu a ọhụrụ atọ profaịlụ na mgbe ahụ ikpokọta nsonaazụ niile anyị profaịlụ na-emepụta ihe emelitere bughi ihe nlereanya efere.”